トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ekupheleni kwenyanga, emva kwexesha pa zegumbi lo msebenzi (sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe okanye open-life)
※ nje ekupheleni
pa parlour Nceda ujonge ngokuba intsingiselo for lonke ushishino, ndicinga ukuba abanye abantu Kudala ndive intlebendwane abangekhe ngaphandle. Enyanisweni, injalo loo nto. Isiphelo pa parlour kukuthi ezininzi iivenkile, nceda ucinga ukuba sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe nalo. Ngasekupheleni isicwangciso soshishino ecacileyo, yenza ixesha hlengiso lokugqibela. (Kubalulekile ukuba icala Flip ukuba, ukuba wena zange wenze wadandulukayo release ibhola ukuya kweli xesha, kukho kwakhona ityala kufuneka licuthwe.) _ X000D_ ezifana
Xintai replacement kunye nentengiso Iindleko ukuba umsitho obanjelwe kukuthi, njengoko iindleko ukususela ekuqaleni kwenyanga imali sele kugqityiwe.
Xintai replacement ikwanoxanduva ekupheleni kwenyanga, iindleko ukususela oko kwenzeka ekuqaleni enyangeni leyo, ukuba imali iza kufika nakanjani ukuchacha kuyimfuneko. Ukuba uya ngokwesicwangciso, andazi nokuba kufuneka ukuba njalo kakhulu wabuyisa nokuba ekupheleni enyangeni leyo, izinto pa na into efana yokungcakaza ngubani ivuliwe. Ebukele i data
, oseqongeni nokuhlawulwa ukuhamba kunye nabavelisi lweempawu, ekugqibeleni, libambisene kunye namava abo, njl, wabetha isikhonkwane, ngokuba siya kuqinisekisa iseti, kakade, ngaphandle phezu engalindelekanga noma akasekho, isibakala sokuba or've bethatyathwe ngelize nje abantu a rhoqo kakhulu ehlabathini.
Ngako pa parlour, yolungelelaniso lokugqibela ingeniso yokusebenza, ngeenxa-20 kwinyanga nganye, waqalisa nsinya isikhonkwane, okanye ukuthoba ekutshoneni Horukon, faka ukumimitheka kwenkqubo. Ethetha kutheni eli xesha, nguye 25 kwinyanga nganye noluntu ngokubanzi, kuza kuba kwabe yakho. Ukuba kukho umvuzo, ukuba ngaphandle, abathengi kum asukele win kunesiqhelo. Ngaphezu kwi ekuqaleni kwenyanga okanye mid, kukuba kusenokwenzeka kum kunye nemali.
Ukongeza, into yokuba kum ngokushushu kakhulu kancinane kunesiqhelo, nokuba iimeko ngokungqongqo isikhonkwane kunye nezicwangciso, ithengiswa phezulu, iya kuba nako ukuphakamisa ingeniso epheleleyo. Kwiintsuku ezimbalwa yemini 25 kakhulu ukuba Hall, intengiso ngaphandle kwakhona ezikhutshwe naye unokubalekela ingeniso epheleleyo navuswa nokuvuswa, iba yokuba ngexesha kwakhona uthole kakhulu ngenyanga enye.
elingakanani Isibakala sokuba nokuba kwakhona ixesha, ngoko kuza ebezibandakanyeka kusilelo kwisicwangciso soshishino kwingqwebo nganye, musa kuthi ngokucacile, xa uye uthathe lag enkulu emva kwisicwangciso ingeniso epheleleyo, ukumimitheka kananjalo ububanzi, uya zanda khosi.
ekupheleni kwenyanga, izikhonkwane uhlengahlengiso kunye nezicwangciso ngokunjalo, Ukuba ulinda ixesha elide kakhulu yaye akuphumelelanga usuku olunye, oko gross isitalato usukelo nzuzo akasayi kuphinda kususwa ngokupheleleyo. In kakhulu isicwangciso yokusebenza ye pa parlour lihlabathi oko kukuthi zentengiso, kuzo zombini i iseti ebiza yenzuzo ezinzulu.
lolungelelwaniso isikhonkwane enye, kwakhona kuthetha ukuba abeke iseti, xa kuthelekiswa ekuqaleni kwenyanga okanye mid, na ububanzi ezingalindelekanga luba ekupheleni ezincinane kwenyanga ukuba avunyelwe. Nokuba intwana, ukuze wachacha ngokuthembekileyo, oko kukuzama ukuba ukusilela ngaphandle hlengiso kuphela, wena imeko nangokwasengqondweni ekupheleni kwicala yabalawuli.
ngenxa nje, ukuba abe zonke kuma kuloo meko, ngaba akukho ngqiqweni ixesha. Ukuze utshintsho kakhulu nje ezimbalwa ithowuni olunye intlawulo elungileyo kakhulu. Uluhlu oko kukuthi uhlengahlengiso isikhonkwane eqhelekileyo kunye Horukon wabeka, kukho izinto ezintle. Ukongeza, slot, njalo njalo, ukuba ibe lula ukubeka utshintsho ngaphezu nezikhonkwane hlengahlengiso, eyenza kube lula ukuba kulindeleke ibhola ngaphandle kuthelekiswa pa.
ekupheleni kumngxunyana, njengoko kuthelekiswa pa, emdlalweni, wena musa ukufumana uncedo lwakho kodwa wathi ukuba imeko disadvantageous. Ukuphela kwenyanga ungazilibali isibakala ukuba sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe nalo, ukuhlolisisa koseko injongo, kubhetele ukuba ukudlala ngaphandle ngokushushu kakhulu a hit kakhulu. Yeyona ububanzi ezingalindelekanga uba ekupheleni ezincinane kwenyanga ukuba. Nokuba intwana, ukuze wachacha ngokuthembekileyo, oko kukuzama ukuba ukusilela ngaphandle hlengiso kuphela, wena imeko nangokwasengqondweni ekupheleni kwicala yabalawuli.
ekupheleni kumngxunyana, njengoko kuthelekiswa pa, emdlalweni, wena musa ukufumana uncedo lwakho kodwa wathi ukuba imeko disadvantageous. Ukuphela kwenyanga ungazilibali isibakala ukuba sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe nalo, ukuhlolisisa koseko injongo, kubhetele ukuba ukudlala ngaphandle ngokushushu kakhulu a hit kakhulu.